बैंकले सार्वजनिक गरे बचतका ब्याजदर, कस्को कति ? - Nepalgunj Business
बैंकले सार्वजनिक गरे बचतका ब्याजदर, कस्को कति ?
काठमाडौँ- काठमाडौँ बुधबार आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सनराइज बैंक, एनएमबि बैंक, जनता बैंक, मेगा बैंक नबिल , प्रभु लगायतका बैंकले ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् । सनराइज बैंकको मुद्दतीमा ९.२५ प्रतिशत व्याज सार्वजनिक गरेको छ भने बचततर्फ ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ । यस बैंकले विभिन्न १८ खाले बचत खाताहरु संचालनमा ल्याएको छ ।
त्यसैगरी, जनता बैंकले पनि मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ८.५० र व्यक्तिगततर्फ ९.२५ प्रतिशत दिएको छ । त्यस्तै, प्रभु बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ८.५० र व्यक्तिगततर्फ ९.२५ प्रतिशत व्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले १८ वटा बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै, मेगा बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ८.५० र व्यक्तिगततर्फ ९.२५ प्रतिशत छ । त्यस्तै बचततर्फ सबैभन्दा बढी ६.५० सबैभन्दा कम ०.५० प्रतिशतसम्म छ । बैंकले अहिले २९ वटा बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
एनएमबि बैंकको मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ८.५० र व्यक्तिगततर्फ ९.२५ प्रतिशत छ भने बचततर्फ ६.५० प्रतिशत छ । यस बैंकले विभिन्न ३५ प्रकारका बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी नबिलले मुद्दतितर्फ ८ प्रतिशत व्याज दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, अशोज १६, २०७६ 8:15:58 AM